Warbixin La Yaab Leh Oo Documentary Ah Oo Laga Diyaariyay Xaalufin Kalluumaysi Sharci Darro Ah Oo Lagu Hayo Baddaha Soomaaliya- DAAWO |
Warbixin La Yaab Leh Oo Documentary Ah Oo Laga Diyaariyay Xaalufin Kalluumaysi Sharci Darro Ah Oo Lagu Hayo Baddaha Soomaaliya- DAAWO
Badda Soomaaliya oo uu ka buuxi khayraad badan oo kala duwan oo uu kow ka yahay Kalluunku ayaa waxa xaalufin xoog leh ku haya Maraakiib waawayn oo shisheeye oo jilaabato ah oo ay inta badan ka yimaada dalalka qaaradaha Yurub, Eeshiya iyo Qaybo ka mid ah Afrika.
Arrintan ayaa sababtay in ay sida fiinta uga qayliyaan kalluumaysatada Soomaalida ah, waxaana sidoo kale dib u bilaabmay dhaqdhaqaaqii budhcad baddeeda Soomaalida, taas oo lagu xidhiidhinayo kalluumeysiga sharci darrada ah ee ku sii badanaya baddaha Soomaaliya.
Hadaba cilmi-baadhis ay sannadkan sameysay hay’adda lagu magacaabo One Earth Future ee fadhigeedu yahay dalka Maraykanka ayaa lagu ogaaday in sanad kasta laga xado badaha Soomaaliya
kalluun qiyaas ahaan gaadhaya 132,000 oo Tan. Tiradaas oo saddex laab ka badan xaddiga kalluumeysatada maxalliga ahi ay jillaabtaan.
Dakhliga sannadlaha ah ee kasoo xarooda kalluumeysiga sharci darrada ahi wuxuu gaadhayaa $306 Million. Halka wax soosaarka kalluumeysatada soomaalidu dhanyahay $58 Million.
Warbixintan Documentary-ga ah oo uu diyaariyay Maxamed Salaad Xaaji Dirir oo ah wariye madax-bannaan oo degan magaalada Garoowe ayaa waxa uu ku iftiiminayaa cidda dhabta ah ee xaalufka badaha Soomaaliya ka danbeysa.